CBL-Mariner, kugoverwa kweLinux kuseri kweWSL, Azure uye zvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Microsoft yakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni yayo yekuparadzira Linux "CBL-Mariner 1.0" (Common Base Linux) chinova chigadzirwa cheMicrosoft icho chinoshandiswa mukati megore uye zvimwe zvinodiwa zvebhizinesi zvekambani.
Saizvozvo CBL-Mariner kwete kugoverwa kwechinangwa senge chero imwe yataizove nayo mupfungwa (seUbuntu kana Fedora) kunyange iri yakavhurwa sosi y iri kutoshandiswa nemaitiro akaita saWinows Subsystem yeLinux (WSL), Azure Sphere OS, SONiC uye mamwe maLinux-based.
Ichi ndizvo izvo Juan Manuel Rey, nhengo yechikwata cheAzure, anogovera pablog rake, Inojekesa kuti kugovera uku kunonzi CBL-Mariner kunoitirwa kushandiswa kwemukati kugadzira zvigadzirwa nemasevhisi mugore.
Mune yako posvo, iwe unodudza:
CBL-Mariner inotevera chirevo chekuchengeteka nekutadza, mazhinji maficha ehurongwa hwekushanda akagadzirwa aine kusimbisa kwekuchengetedza. Iyo inouya neyakaomeswa kernel, yakasainwa inogadziridzwa, ASLR, compiler-based kuomesa, uye kukanganisa tamper-proof marejista, pakati pezvakawanda maficha.
Iyo purojekiti inovavarira kubatanidza mhinduro dzeLinux dzinoshandiswa muMicrosoft uye kurerutsa kugadziriswa kweLinux masisitimu ezvinangwa zvakasiyana kusvika zvino. Zvese software matekinoroji mune ino tsika anosunungurwa pasi peMIT rezinesi.
CBL-Mariner kuvaka system inobvumidza kuburitsa yakaparadzana RPM mapakeji zvichibva pamafaera eESEC uye makodhi sosi, uye monolithic system mifananidzo inogadzirwa ichishandisa rpm-ostree toolkit uye yakagadziridzwa nemaatomiki isina kupatsanurwa akapatsanurwa mapakeji, pamwe zvakare mhinduro dzakaomarara uye dzakasarudzika dzinogona kugadzirwa nekuwedzera mamwe mafuta muSVL-Mariner, asi hwaro hwenguva dzose idzi
Maviri ekuvandudza mamodheru anotsigirwa: kugadzirisa chete mapakeji ega uye kumhanya uye kugadzirisa iyo yese system mufananidzo.
Kuti ushandise iyo "maximum security by default" nzira. Izvo zvinokwanisika kusefa sisitimu yekufona nerubatsiro rweiyo sensor mashini, encrypt zvikamu zve diski, simbisa mapassword nesiginicha yavo yedhijitari uye nezvimwe zvakawanda.
Nekutadza, nzira dzekudzivirira pakurwadzisa madziro, buffer kufashukira uye kushomeka kweiyo fomati peji. Iyo kero nzvimbo randomization modes inotsigirwa neLinux kernel inogoneswa, pamwe nenzira dzakasiyana dzekudzivirira pakurwisa kwakabatana nezviratidzo zvekufananidza, mmap, / dеv / mem, uye / dеv / kmеm.
Maitiro ekuisa Microsoft CBL-Mariner?
Kune avo vanofarira kudzidza zvakawanda nezve CBL-Mariner, vanofanirwa kuziva izvozvo vanogona kuvaka yavo pachezvayo kubva kuUbuntu kana chero kugoverwa kweLinux, chete mune ino kesi isu ticha tora iwo ma rairo ekugadzira iyo mufananidzo muUbuntu.
Kuti uite izvi kutanga, isu tinofanirwa kukurudzira zvimwe zvinotarisirwa izvo isu tichafanirwa kuvaka iyo ISO mufananidzo:
Iye zvino tinoenderera mberi nekuwana kodhi kubva kuCBL-Mariner:
Uye ikozvino isu tichafanirwa kupinda iyo CBL-Mariner / toolkit dhairekitori uye kugadzira iyo yekuisa ISO mufananidzo.
Pakupedzisira, tinogona kuwana iyo ISO faira mune dhairekitori ../out/images/full/. Nemufananidzo wesystem wakagadzirwa, tinogona kuyedza system pamushini chaiwo, kungave neVirtualBox, VMWare, Mabhokisi kana chero chaunoda.
Chinhu chega chaunofanirwa kugadzirisa mumuchina chaiwo ndechekuti ine 2GB ye RAM, yepakati uye 16GB yekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CBL-Mariner, kugoverwa kweLinux kuseri kweWSL, Azure uye zvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft